Ny hatsaran-tarehin'ny The Bernina Express | Save A Train
Home > Fiaran-dalamby Switzerland > Ny hatsaran-tarehin'ny The Bernina Express
Bernina Express is one of the most beautiful nandehanany fiaran-dalamby eto amin'izao tontolo izao. Voalohany indrindra, Eo amin'ny Rauma-dalana, from Dombas ho Andalsnes (Norvezy), dia afaka mahazo fomba fijery ny tampon'isa ambony. koa, hitanao tehezan-tendrombohitra sy ny lembalemba rehefa mandalo Rauma River. Fanampin'izany, you can also see Europes highest rock face Trollveggen and the gorgeous akoho tetezana.
Mahavariana endriky ny Cinque Terre Italia.
Eo amin'ny Cinque Terre eo Levanto sy La Spezia (Italia), ianao handeha hamaky ny sary-lavorary tanàna, sahan'oliva, tanim-boaloboka, and the unforgettable turquoise Ligurian ranomasina. The Central Rhin Railway eo Bingen sy ny Koblenz (Alemaina) Toy ny zavatra avy amin'ny Fairytale amin'ny lapa fahiny ambonin'ny rano.
Angamba ny tsara indrindra sy ny hilaza Toerana mahafinaritra rail hitsangantsangana any Eoropa ny Bernina Express. Of all the Toerana mahafinaritra Soisa mitaingina fiaran-dalamby, Bernina no tena tsara tarehy. Mitaingina fiaran-dalamby io tolotra Panoramika hevitra avy amin'ny Chur & St Moritz any amin'ny faritra atsinanan'i Soisa atsimo ho any Tirano any avaratr'i Italia. izany mitaingina fiaran-dalamby maka eo ho eo 4 ora rehefa handrakotra 90 kilaometatra avy eo amin'ny ranomandry ny Soisa ny masoandro ny Italia. Izany dia mitaky 55 tonelina ary ny 196 tetezana. Ny lalamby no Tapitra 120 taona no ho dia Lova Iraisam-pirenena UNESCO toerana. Ny Bernina Express mizara tsipika amin'ny Glacier Express ary manarona ny rehetra Landwasser Viaduct. Manatòna An'i Pontresina, ny fiaran-dalamby miakatra ho any amin'ny Bernina Pass, avy eo ny Morteratsch Glacier. Ny fiaran-dalamby teboka avo indrindra any Hospice Bernina izay mipetraka eo 7000 feet ambonin'ny ranomasina.
Amin'ny lafiny iray hafa ao amin'ity tendrombohitra ity, ny fiaran-dalamby mandalo korontam-hazo alohan'ny nijanona teo am-tarehy tanànan'i Poschiavo. Ny fiaran-dalamby avy eo mivoaka mankany amin'ny Epic Brusio miolakolaka Viaduct. Saika ny sary eo amin'ity dia ity hatao any.
Cologne ho Koblenz Lamasinina
Essen ho Koblenz Lamasinina
Trier ho Koblenz Lamasinina
Ireto misy vaovao manan-danja raha toa ianao ka mieritreritra ny nandray ny fiaran-dalamby Express Bernina;
Raha toa ianao ka mandeha in ririnina, ny northbound lalana ny ankamaroany diany rehefa izany dia maizina, ka dia tara be dia be ny tsara tarehy toerana manodidina.
Fanampin'izany, ny kilasy faharoa tena tsara ity lamasinina rehetra ho toy ny asa mitovy kilasy voalohany, ka tsy ilaina ny mandoa vola fanampiny kely raha tsy tianao tsy dia be olona seza.
Eo amin'ny southbound fiaran-dalamby, te-hipetraka eo ankavanan'ilay-tanana ilany ny fiaran-dalamby. Koa satria ny Soisa toerana manodidina azo jerena amin'ny lafiny iray. sy ny northbound fiaran-dalamby, te-hipetraka eo amin'ny lafiny ankavia-tanana.
Ny lehibe Panoramika tsy manokatra varavarankely. Misy misokatra kely akaikin'ny varavarana ny fiaran-dalamby. Azonao atao ny maka ny sary avy amin'izy ireo (tsy misy maha-taratra).
Mieritreritra ve ianao dia lavitra ny Bernina Express? Nahoana raha 3 minitra ary mahita fiaran-dalamby mora kokoa tapakila amin'ny www.saveatrain.com . Fenoy ny daty sy ny fotoana izay tianao dia lavitra, ary dia hanome anao ny tsara indrindra amin'ny vidiny ho amin'ny alehanareo, izay azo aloa fa amin'ny fomba maro anisan'izany Paypal sy Bitcoin.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy amin'ny toerana, dia tsindrio eto: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/beautiful-bernina-express/ - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)